Sarm RAD140 (टेस्टोलोन) प्रयोगकर्ताले भने: समीक्षाहरू, चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जोखिमहरू
1। RAD140 (टेस्टोलोन) समीक्षा
2। RAD140 (टेस्टोलोन) के हो?
3। कार्यको तंत्र
4। RAD140 स्ट्याक र उपयोग
5। RAD140 को प्रयोग पछि के आशा गर्न को लागी
6। जोखिम र साइड-प्रभाव
7। प्रयोगकर्ता अनुभव
8। RAD140 कसले प्रयोग गर्न सक्छ?
9। RAD140 कहाँ लिनु हुन्छ?
RAD140 एक नयाँ यौगिक हो, धीरे - धीरे लोकप्रियता मा एक चयनी एण्ड्रोजन रिसेप्टर मड्युलेटर जस्तै SARM पनि। यो दबाइ उत्पादन मुख्यतः पोष्टमेन्सनल महिलाहरु मा मांसपेशियों को बर्बाद र स्तन कैंसर को उपचार को लागि ......
1. RAD140 (टेस्टोलोन) समीक्षा
जब यो दबाइ उत्पादनहरू छनौट गर्नुपर्दछ, तपाईलाई थप सावधान हुनुपर्छ। गलत व्यक्तिहरू नचाहिने अनावश्यक नतिजाहरू नचाहिने तर नराम्रा पनि हुनेछ; यसले तपाईंको स्वास्थ्य बिग्रियो। Phcoker ले ड्रग्सको निर्माणमा यसको लायक साबित गरेको छ, र उनीहरूको बीचमा RAD140 (टेस्टोलोन)।
2. RAD140 (टेस्टोलोन) के हो?
RAD140 एक नयाँ कम्पाउन्ड हो, बिस्तारै लोकप्रिय छनौट एन्ड्रोजेन रिसेप्टर मोडुलर, SARM को रूपमा। यो फार्मास्यूटिकल उत्पादन मुख्यत: पोस्टमेनोपौसल महिलाहरूमा मांसपेशि खेर फाल्ने र स्तनको क्यान्सरको उपचारको लागि हो। यो एक्सएनयूएमएक्समा पत्ता लागेको थियो र यसले धेरै रिपोर्टहरू र समीक्षाका साथ आशाजनक संकेतहरू देखायो जुन यो आफ्नो मांसपेशि बिल्डिंग गुण परीक्षणमा सफल भएको संकेत गर्दछ। अरु के छ त? को एफडीए अनुमोदन गरियो यो।
यदि तपाइँ निश्चित भएन भने तपाईले यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ भने, यो RAD140 समीक्षाले यसको फाइदा, साइड-इफेक्ट, अपेक्षाहरू र खुट्टालाई बुझ्न मद्दत पुर्याउनुको साथै तपाईं एक राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
3. कार्यको तंत्र
RAD140 1182367-47-0 बजारमा सबैभन्दा उत्तम SARM मध्ये सबै भन्दा फरक फरक पार्नु भएको छ। यसले मांसपेशी र प्रयोगकर्ताको हड्डी उत्प्रेर्युलेट एरेजन रिसेप्टरले प्रजनन प्रणालीको तुलनामा उच्च सम्बन्धको साथ काम गर्दछ। RAD140 लाई बाँड्ने क्रममा विभिन्न प्रोटीनहरूको प्रतिक्रियाले गर्दा यो कारणले चयन गरिएको रूपमा किन कारण छ। केहि प्रोटीन अलग-अलग एस्ट्रोजन रिसेप्टर संग बातचीत गर्नेछन् कि केहि कोशिकाहरु लाई विभिन्न प्रोटीन जारी गरेर यसलाई प्रतिक्रिया दि्छ।
रिलीज प्रोटीनहरूले याडेन रिसेप्टरलाई प्रभाव पार्दा RAD140 लाई प्रवर्द्धन वा रोक लगाउँदछ। अन्तमा, नतिजाहरू प्रयोगकर्ताको शरीर सक्रिय हुने तर सबै होइन रसिनो रिसेप्टर हुनेछन्।
RAD140 को बारेमा एक कुरा यो फरक छ। यसको संरचना अन्य हार्मोनबाट टेस्टोस्टेरोन जस्तै फरक छ। यो एक तरिका मा फायदेमंद छ कि यसको ढाँचा यस हार्मोन को अन्य हार्मोन मा बदलन को रोकथाम गर्दछ जुन अवांछनीय तरिकाहरुमा प्रतिक्रिया हुन सक्छ।
RAD140 काम गर्दछ हड्डिहरु र मांसपेशियों को उत्तेजित गरेर प्रोस्टेट र सेमिनल vesicles को संरक्षण, शुक्राणु उत्पादन को लागि जिम्मेदार अंग। अरु के छ त? यो चूहहरुमा कम विषैले छ र जिगर एंजाइमहरु लाई गुणा गर्दैन। यसले मस्तिष्क क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति र सेलुलर स्वास्थ्य र व्यवहार्यतामा सुधारको लागि जिम्मेवार विशेष जैविक रासायनिक मार्गमा सक्रिय पार्ने मस्तिष्कमा एण्ड्रोजन रिसेप्टरहरू पनि सक्रिय गर्न सक्दछ।
4. RAD140 Stack र Uऋषि
RAD140 प्रयोग गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। यसको साथ आउनु भएका गुणहरू टेस्टोस्टेरोनको कम दमन हो। यस तरिका, तपाईं 6-8 हप्ता चक्रमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो शायद नेटिय्स र SARM-मात्र प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्तम हो। मेलनोटन-II / MT6 मा2कुञ्जी बिन्दु जुन तपाईंलाई थाहा छ
यस उत्पादनको प्रयोगको लागि अर्को मार्ग यो परीक्षण चक्रमा वा जब ब्लास्टिङ वा क्रुजिंगमा थप्दैछ। यो विधि केही फायदाहरूसँग आउँछ कि यसले परीक्षणका प्रभावहरू बढाउँछ र साइडेट र सेमिनल वेसेक्सन र लिभरमा साइड इफेक्टहरू कम गर्छ। अझ राम्राे; यो सुक्खन लान मास लगाउने मा एड्स।
यस उत्पादनको अर्को शानदार गुण यो हो कि यसले तपाईंलाई परीक्षण वा क्लिटरिसलाई प्रभाव पार्ने बिना अधिक वासुलर हेर्न सक्छ। वास्तवमा, केही खेलाडीहरूले यसलाई थप्न रोजेको छ PCT चक्र जस्तै उनि परीक्षा आउँछन्। यद्यपि, यो मार्केटमा नया छ किनकि यो सिफारिशयोग्य छैन र केवल केहि जानकारी यसको बारे जान्दछ। त्यहाँ केही विरोधाभासी रिपोर्टहरू छन् कि सुझाव दिईएको औषधिले दमनको नेतृत्व गर्न सक्छ वा हुन सक्छ। चाहे कति जोखिम खतरा हुन्छ भने, यो भन्दा राम्रो छ भने बाहेक दोस्रो अनुमानित परिणाम भन्दा बाहेक।
सिफारिस गरिएको 1182367-47-0 खुराक एक दिनमा 20-30 मिलीग्राम हो। यदि तपाईं यसको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक राम्रो खुराकमा राम्रो सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा रकम बढाउनुहोस्। तपाईलाई पनि ध्यान दिनुहोस् कि अन्य SARMS जस्तो कि तपाईँले केही समय अघि लाग्न सक्नुहुनेछ यसको विपरीत, तपाईं भावना सुरु र एक हप्तामा प्रभाव देख्न सक्नुहुनेछ।
सामान्यतया, यसको प्रयोग गर्ने तीन मोडहरू;
टेस्टोलोन RAD140 एक्लै प्रयोग गरी RAD140stack को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुरुषहरूका लागि, सिफारिश गरिएको खुट्टा, यस अवस्थामा,520 Mg दैनिक हो। यो 30mg भन्दा बढी हुनुपर्दछ। यदि तपाईं यो तरिका लिनु निर्णय गर्नुहुन्छ; सिफारिस गरिएको चक्र 12 16 हप्तामा छ। त्यसपछि6लाई 8 ब्रेक सहित पोष्ट चक्र समावेश गर्नुहोस्।
कम्पाउन्ड कुनै पनि SARM सँग राम्रो काम गर्दछ। तपाईं यसलाई LGS को साथ स्ट्याक गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं बिस्तारै वा कार्डाराइनको लागि हुनुहुन्छ भने यदि तपाईं काट्नु भएको छ। यदि लक्ष्य रिकभरी वा चोट लिनु हो भने, तपाईं यसलाई स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ Ostarine.
एनाबिक स्टेरियोड्ससँग स्ट्याक गर्दै
टेस्टोलोन RAD140 को एक फायदा हो कि तपाईं यसलाई टेस्टोस्टेरोन संग संयोजित गर्न सक्छन् र यसलाई तपाईंको स्टेरॉयड चक्र को आधार मा प्रयोग गर्न सक्छन्। यो एक तरिका मा फायदेमंद छ कि यो दुष्प्रभाव को कम गर्न मा मदद गर्दछ।
(1) RAD140 खुराक
काटने को लागि - यदि तपाईं यो उत्पादन काटनको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, आदर्श खुट्टा5प्रति दिन 10 मिलीग्राममा छ। तपाईं आफ्नो पेय वा खाना संग बिहान बिहानै यो लिन सक्नुहुन्छ। यो फायदेमंद छ किनकी यसले तपाईंको शरीरलाई खरानीमा खरिद गर्न मद्दत गर्दछ। काटिएको चरणको समयमा यो लागि सिफारिशयोग्य चक्र 8 12 हप्तामा छ।
बल्किंग र पुन: संरचनाको लागि - यदि तपाईं मांसपेशी भवन खोजिरहनुभएको छ वा तपाईं यस उत्पादनको मांसपेशी वृद्धि उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, सिफारिश गरिएको खुट्टा 15 प्रति दिन 20mg हो। यो लिन सजिलो छ, र तपाईं यसलाई आफ्नो खाना वा पिउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस चरणको लागि, सिफारिशयोग्य चक्र लम्बाइ 8 12 हप्तामा छ।
RAD140 आधा-जीवन - RAD140 आधा-जीवन 15 भित्र 18 घण्टाको बीचमा छ, जुन अरु SARM हरू भन्दा कम छ। तपाईंले एक दिनमा मात्र एक पटक लिनु पर्छ, र पोस्ट चक्र थेरेपी एक दिन पछि विचाराधीन सुरु गर्नुपर्छ। तपाईं दिनभरि खुट्टा विभाजित गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा, तपाईंले यसलाई एकैचोटि सबै लिनु पर्छ। कम्पाउन्डको प्रभावकारितामा कुनै साइड इफेक्टहरू जुन प्रयोगको यस मोडमा आउँदैन।
(2) चक्र थेरेपी पोस्ट गर्नुहोस्
RAD140 प्रयोगकर्ताहरू जस्तै मांसपेशी र बडिबिल्डरहरूले यो पदार्थ चक्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सामान्यतया, तिनीहरूले निरन्तर रूपमा 8 सम्म 12 हप्ताको लागि पदार्थ प्रयोग गर्नेछ। यो चक्र समाप्त भएपछि, तिनीहरू यसलाई प्रयोग गर्न रोक्न र हार्मोनहरूलाई तिनीहरूको प्राकृतिक स्तरमा फिर्ता लिन अनुमति दिन्छ। यो पोस्ट चक्र थेरेपी (पीटीसी) को रूपमा जानिन्छ, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कुनै अप्रत्याशित दुष्प्रभाव को जोखिम को कम गर्न को लागी यो सिफारिस गरिन्छ। एफडीए स्वीकृत Lorcaserin एचसीएल को मोटापे को उपचार को लागि
पोस्ट चक्र थेरेपीको लम्बाइ एक प्रयोगकर्ताबाट अन्यमा भिन्न हुन सक्छ, तर यो प्रायः डाइभोज अवधिमा जडान भएको छ। व्यक्तिको उदाहरण लिनुहोस् जुन कम्तीमा आठ हप्ता गैर-स्टपका लागि प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गरेर आठ-हप्ता ब्रेक लिनुपर्छ। एउटै मामला 12 हप्ताको लागि प्रयोग गरिरहनु भएकोमा लागू हुन्छ; पीटीसीले 12 हप्ताको अन्त गर्नु पर्छ।
5. RAD1 को प्रयोग पछि के आशा गर्न को लागी40
तपाईं आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईं हरेक बिट प्रक्रियालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईं भावना र परिवर्तनको आनन्द उठाउनुहुनेछ। एक RAD104 स्ट्याकमा रहेको लगभग लगभग n अन्य टेस्टोस्टेरोन जस्तो छ तर अब एक अनावश्यक उच्च खुराकमा। यो पूरै लायक छ। तपाईंले अनुभव गर्नुभएका केही परिवर्तनहरू छन्;
♦ दुबईको मांसपेशी बढ्यो
क्यान्सर र एचआईभी / एड्स जस्ता केही रोगहरूले उच्च स्तरको वजन घटाएर काम गर्दछ जुन महत्त्वपूर्ण मांसपेशिहरु ऊतक वजन घटाने गरिन्छ। यो मांसपेशियों को बर्बाद, कमजोरी, थकान मा सबै परिणामहरु लाई पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पनि कठिन र असंगनीय बनािन्छ।
RAD140 यसको मांसपेशिहरु निर्माण गुण संग एक उद्धारकर्ता को रूप मा आउछ, जो हड्डिहरु र मांसपेशियों को बल लाभ मा एड्स। यसले वजन घटाने समस्या उल्टाउने र हड्डी र मांसपेशिहरु सेल वृद्धि मा वृद्धि को माध्यम ले वजन बढाएर काम गर्दछ।
यसको चयनयोग्य सम्पदाको कारण, औषधिले प्रोस्टेट क्यान्सर छ र सबैभन्दा राम्रो भागमा वजन सुधार गर्न सक्दछन् भने यो टेस्टोस्टेरोन भन्दा विपरीत, प्रोस्टेट विकासमा वृद्धिको उत्तेजना बिना। यो उत्पादनले साइड इफेक्टलाई कम गर्दै गर्दा टेस्टोस्टेरोनको अधिकतर सकारात्मक प्रभावहरु माईकिक्स गर्दछ। तथापि, RAD140 को सही फाईफ साबित भएका छन् तर निस्सन्देह, यसले बल बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। यो वृद्धि मांसपेशियों मा मास को माध्यम ले र वसा ऊतकों को कम गर्न को माध्यम ले प्राप्त गरेको छ। साथै, चरम प्रशिक्षणको समयमा बिरुवाको बिरुवामा दबाइ र सहनशीलता बढाउन ड्रग रिपोर्ट गरिएको छ।
♦ फैट हानि
व्यक्तिहरूले यो उत्पादन प्रयोग गर्नुभएका व्यक्तिहरूले समयको साथमा महत्त्वपूर्ण वसा हानि गरे, तर यो साबित भएको छ। यकीन छ के लागि जान्दछ कि RAD140 लाई अप्रत्यक्ष मा वृद्धि मा मांसपेशी मार्फत वसा र वजन घटा को बढावा दिन सक्छ। यसले उनीहरूको दुबला मांसपेशिहरु गुमाउनु बिना वजन कम गर्ने मानिसहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लोभ घनत्व लिपोप्रोटिनको रूपमा उल्टो मोटो अणुहरूको परिसंचरण कम गरेर यो प्राप्त गर्दछ। वृद्धि मांसपेशियों मा मांसपेशी प्रक्रिया को दर यस तरिका मा फैट ऊतक को हानि को बढावा बढा सकते हो।
♦ राम्रो मस्तिष्क प्रकार्य
यस औषधीको लागि एमीलोइड बेटा प्रोटीनले गर्दा मस्तिष्कको चोटहरूको बिरुद्ध आफ्नो मस्तिष्कको रक्षा गर्न अपेक्षा गर्दछ। यो प्रोटीन हो जसले अल्जाइमरको विकासमा ठूलो भाग खेल्छ। 1182367-47-0 RAD140 प्रोटीनको संचय कम गरेर काम गर्दछ, मस्तिष्क सेल वृद्धि बढाउन र सिप्प्टन प्लास्टिक plasticity लाई बढाउने। यी प्रभावहरूले यो एन्डरेन्सको एस्ट्रोजेन र अन्य स्टेरॉयडल हार्मोनमा रूपान्तरित पार्छ।
♦ स्तन क्यान्सर विरुद्ध लड्नुहोस्
RAD140 ले स्तनपानको क्यान्सरको उपचारमा आशाजनक नतिजा देखाउनुभएको छ जुन एस्ट्रोजन र एस्ट्रोजनको लागि सकारात्मक परीक्षण गर्दछ। दबाइले क्यान्सर सेल विकासको महत्त्वपूर्ण दमन देखाउछ, जुन यसले ऊतकमा एस्ट्रोजनको प्रभावलाई बाधा पुर्याउँछ। RAD140 ESRI उत्पादन, क्यान्सर वृद्धिको लागि जिम्मेवार प्रोटीनको उत्पादन गर्दछ।
♦ ठूलो महसुस
यस औषधिको समग्र प्रभाव स्वस्थताको भावना हो। तपाईं आराम, आनन्द र निराशा हटाउन पनि महसुस गर्नुहुन्छ। यसले क्यान्सेटको स्रावलाई रोक्न सिद्ध गरेको छ, एमेनो एसिड जुन अल्जाइमरको लागि उत्तरदायी छ। नतिजा सुधारिएको मूड र राम्रो स्पष्टता जसको फिर्तीमा समग्र भलाई संग हुन्छ।
♦ बढेको बल
धेरै व्यक्तिहरूले यो प्रयोग गरेको छ भने उनीहरूको लिफ्ट थ्रेसहोल्डहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको छ विशेष गरी छाती, जांघ र पछाडिको क्षेत्रमा।
6. जोखिम र साइड-प्रभाव
RAD140 अझै नयाँ छ र कुनै पनि साइड इफेक्ट रिपोर्ट बिना बिना अनुसन्धान उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि यो जोखिम मुक्त छ। सम्भावित जोखिम अझै निर्धारण गर्न सकिन्छ। टेस्टोस्टेरोन को स्तर को प्रभावित गर्न को लागी अन्य पदार्थ जस्तै, RAD140 ले अवांछित साइड इफेक्ट को कारण हुन सक्छ को संभावना ले सकते हो;
मतलब मा स्तन वृद्धि
सेक्स ड्राइव मा प्रभाव
महिलाहरु मा धेरै अधिक बाल विकास
विलक्षण र उल्टीको नेतृत्व गर्न सक्छ
यद्यपि, कम्जाउण्ड प्रयोगको लागि पुरा तरिकाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अति उच्च खुराकमा पनि, RAD140 ले अनुसन्धानत्मक अवस्थाको दौरान जिगर एंजाइमहरूलाई असर पारेन। त्यहाँ प्रोस्टेट वृद्धि वा एस्ट्रोजन स्पाइकको कुनै पनि अवस्था थिएन। अहिले सम्म, 1182367-47-0 RAD140 ले मानिसलाई बिना अनावश्यक नतिजा पाउन नसक्ने डरको बारेमा सुरक्षित प्रयोगको लागि सुरक्षित रूपमा सिफारिस गरिएको छ।
7. प्रयोगकर्ता अनुभव
त्यहाँ धेरै प्रयोग गरिएका RAD140 समीक्षाहरू छन् जसले पहिले यो प्रयोग गरेको छ। यी RAD140 समीक्षाहरू भन्दा धेरै सकारात्मक छन् तर यहाँ र त्यहाँ केही गहिरो शिकायतहरू छन्। एक हुनु शरीर सौष्ठव पूरक, व्यक्तिहरूले रिपोर्ट सफलतापूर्वक दुबई जन विकास मा मद्दत र वसा ऊतक को हानि मा सहायता दिए। SARM पूरक समीक्षाले यो सुझाव दिए कि यसले चरम वर्कआउटको समयमा सहनशीलता, सहनशीलता, र गति सुधार गर्न मद्दत पुर्याएको छ जसले वसा हानि र मांसपेशी विकासको दर बढाउनु आवश्यक छ।
RAD140 लाई अन्य SARM को तुलनामा छोटो समयमा परिणामहरू प्रदर्शन गर्न रिपोर्ट गरिएको थियो। प्रयोगकर्ताहरूले यसको प्रयोगमा लगाउने एक हप्ता भित्र वजन घटाने र मांसपेशी लाभ हासिल गरेको छ। अझ राम्राे; जो लोग साइड इफेक्ट्स को अनुभव को लागि उत्पादन को उपयोग पछि सेक्स ड्राइव को बदलन को रूप मा, प्रभाव जल्द देखि जल्द को रूप मा उनि यसलाई उपयोग गर्न को लागि बंद। यसको अधिकांश डाइमेक्ट चक्रहरू 8 सम्म 12 हप्ताको बीचमा झन् झन् झन् बढि हुन्छ तर केही चार हप्तासम्म यसको परिणाम केवल चार हप्ताको लागि राम्रो हुन्छ। प्रदर्शित प्रभावहरू अघि लिइएको समय व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता, फिटनेस स्तर र चयापचयको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। SARM माथि 10 मा पूरकहरू: SR9009 (1379686-30-2)
RAD140 एक चयनकर्ता यौगिकको रुपमा चिनिन्छ र यस सम्पत्तिको कारणले; यो टेस्टोस्टेरोन रिलीज मा न्यूनतम प्रभाव छ। यसले महिलाहरूको लागि अझ राम्रो बनाउँछ जसले ठूलो लाभ उठाउन र मांसपेशी बनाउँदछ बिना अधिक मज्जा हटाउँदछ।
यद्यपि यो कम टेस्टोस्टेरोन रिलीजसँग सम्बन्धित छ, प्रयोगकर्ताहरूले अझै पनि कुनै पनि जोखिम र प्राकृतिक हार्मोन उत्पादनको लागि जगेडा गर्न सही दाई र पीटीसी अवधि पछ्याउनुपर्दछ। केहि व्यक्तियों RAD140 को उपयोग आफ्नो PTC को समयमा र उनको उपयोग को रोक को समयमा ठीक छ को रूप मा उपयोग को रूप मा यस चरण मा प्राप्त मांसपेशियों को जन को रखरखाव मा मदद गर्दछ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू भन्नाले यो SARM स्टेरियोडहरूको सबैभन्दा नजिकको पूरक हो। यसको मतलब तपाईंले ठूलो परिवर्तनहरू हेर्न चाहानुहुन्छ, विशेष गरी मांसपेशी र शक्तिमा। तपाईंले वजन घटाने को एक महत्त्वपूर्ण राशि हेर्न अपेक्षा गर्नुपर्छ।
प्रयोगकर्ताहरू कम्पाउण्डमा आउने धेरै फाइदाहरूसँग पनि खुसी थिए, उनीहरूको बीचमा;
यो प्रयोग गर्न सजिलो छ जस्तो कि इंजेक्शनको आवश्यकता छैन, तर बरु, यसलाई मौखिक रूपमा लिइएको छ
यसले उचित लाभ दिन्छ
मांसपेशिहरु को निर्माण को लागि उत्कृष्ट
राम्रो बोसोको लागि राम्रो
यसले टेस्टोस्टेरोनको फाइदाहरूको अनुकरण गर्दछ, साइड इफेक्टहरू इमेज गर्न
यसले एस्ट्रोजेनमा परिवर्तन गर्दैन
यसले सहनशीलता, गति, र अस्थिरता बढाउँछ
महिलाहरूको लागि सुरक्षित
यो सबै प्रकारका फिटनेस लक्ष्यहरूको लागि उपयुक्त छ
8. RAD140 कसले प्रयोग गर्न सक्छ?
यो पूरक लागि आदर्श छ;
पुरुषहरु लाई कम टेस्टोस्टेरोन को स्तर संग एनाबिक स्टेरियोड को दुर्व्यवहार या हाइपोगोनडवाद जस्तै स्वास्थ्य अवस्थाहरु को कारण
व्यक्तिहरू स्टेरॉइड चक्र प्रयोग गर्दै छन् र उनीहरूको चक्रको बीचको अंतरलाई मांसपेशी लाभ जस्ता लाभहरू राख्नको लागी अन्य अंगहरूलाई असर नगर्न चाहन्छन्।
शरीर निर्माणकर्ताहरूले आफ्ना प्रदर्शन दर सुधार गर्न चाहन्छन् एथलीटहरू तर अन्य पारंपरिक प्रदर्शन बढ्दो पदार्थहरूको साइड इफेक्टहरू प्राप्त गर्नबाट बच्न चाहन्छन्।
पुरुष जो स्त्रीकोस्टियामा संवेदनशील हुन्छन्
महिलाहरु जो कि अधिक मुस्कुराहट को बिना मांसपेशिहरु लाई प्राप्त गर्न चाहते हो
स्तन क्यान्सर संग महिलाहरु
9. कहाँ कuy RAD140?
यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ RAD140 को लागि बिक्री र उत्तम SARM स्रोत, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाई यसलाई एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। उत्पादन खोज्न गाह्रो भएको छ किनकी यसले लोकप्रियता प्राप्त गर्दछ र कानुनी नियमहरूको कारणले। यसले आपूर्तिकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धिको कारणले भण्डारमा रहेको दाबी गरेको छ, र यदि तपाईं पर्याप्त सावधान हुनुहुन्न भने, तपाईं नकली उत्पादन समाप्त हुन सक्नुहुनेछ। सौभाग्य देखि Phcoker ले वैध उत्पाद अन्वेषक छ, र तपाईं हामीलाई उचित मूल्यमा तपाईंलाई वितरित गर्न मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, एउटा अर्डर आराम गर्नुहोस् जुन तपाईंको गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्नेछ।
2019-05-282मा: 39
2019-05-287मा: 14
मलाई सम्झना छ कि हामी सहयोग को रूप मा सहयोग को रूप मा जान्छ।
RAD140 पोल्वो, शुद्ध 98 को लागि यो गारंटी। यो सही तरिका मा आफ्नो ग्राहक को रूप मा पठा्नुहोस। Entonces, ¿podrías decirnos cuántos RAD140 quieres?
2019-10-293मा: 13 बजे
Quisiera saber si hay algún susma si al estar tomando RAD 140 उपभोक्ता bebidas alcohólicas
2019-10-31 1 मा: 49
ग्रेसियस पोर सुस प्रिगन्ट्स, पेरो सोलो सोमोस ब्युनोस पैरा प्रोपोर्सिओन प्रोडक्टस डे अल्टा क्यालिडाड, ई पोजिबल क्यू नो सीमोस ब्यूएनोस एन एल यूएसो, ले प्रिगन्टर ए माई क्लाइन्ट सी प्यूटेन तोमर बेबिडास अल्कोहोलिकस ओ, ग्रेसेज।
2019-11-067मा: 38 बजे
Se puede tomar en conjunto con dianabol y proviron como protender m prots un protector hepático?
2019-11-293मा: 46
2019-11-293मा: 59
के तपाईसँग यस उत्पादन किन्न रुचि छ?
Nootropic स्रोत Bromantane: समीक्षा, प्रभाव, डोजज